ပြင်ဆင် Get | နည်းပြ၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအစည်းအရုံး
အဆိုပါ9ပိတ်ပင်နည်းပြ Mastery နားလည်ခြင်း® နှင့်တိုက်ရိုက်နည်းပြ session တစ်ခုအတွက်သင့်လျော်စွာသူတို့ကိုလျှောက်ထားနိုင်ဖြစ်ခြင်းအကောင်းဆုံးလေ့လာမှု, အလေ့အကျင့်, ကိုယ်ပိုင်နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်-တုံ့ပြန်ချက်မှတဆင့်အောင်မြင်သဖြင့်,9ပိတ်ပင်နည်းပြ Mastery ပေါင်းစပ်နိုင်ပါတယ်® သင်၏အသက်တာနှင့်စီးပွားရေးသို့။
အဆိုပါနည်းပြ Mastery နှင့်မည်သို့သင်၏အသက်တာနှင့်စီးပွားရေးသို့သူတို့ကိုငါပေါင်းစပ်ဖို့အကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ။
အသစ်သောနည်းပြပညာပေးနှင့်လေ့ကျင့်ပေးဖို့တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင်ရရှိနိုင်နည်းပြကျောင်းများရာချီရှိပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ပြုသောပူဇော်သက္ကာကိုတစ်ခုတည်းတနင်္ဂနွေကနေ 24 လအစီအစဉ်များအထိနိုင်ပါတယ်။ တချို့ကကျောင်းများစက်မှုလုပ်ငန်း-အသိအမှတ်ပြုသို့မဟုတ်နည်းပြအသင်းအဖွဲ့များနှင့်အတူဆက်နွယ်ပါ၏ တချို့မရှိကြပေ။ တချို့ကအစီအစဉ်များကိုယေဘုယျဘဝနည်းပြကျွမ်းကျင်မှုသင်ပေး; အခြားသူများကိုတစ်ဦးအထူးသဖြင့်နည်းပြနယ်ပယ်သို့မဟုတ်အထူးပြုအာရုံစိုက်ပါ။ ဤအရာအလုံးစုံရွေးချယ်မှုနှင့်အတူကအကောင်းဆုံးမထိုက်မတန်သောအရာကျောင်းမှဆုံးဖြတ်ရန်နည်းပြ beginner တွေအတွက်စိန်ခေါ်မှုပါပဲ။
ညာဘက်သင်တို့အဘို့င်သောနည်းပြလေ့ကျင့်ရေးကိုရှေးခယျြဖို့, တစ်ကျောင်းသို့မဟုတ် program တစ်ခုကိုရှာဖွေ:
အဆိုပါ9ပိတ်ပင်နည်းပြ Mastery, ထိုပိတ်ပင် Ethical အခြေခံမူများနှင့်ကျင့်ဝတ်များပိတ်ပင် Code ကိုအပေါ်အခြေခံပြီးတစ်ဦးသင်ရိုးညွှန်းတမ်းရှိပါတယ်
သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပညာရေး, အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်နှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အတွေ့အကြုံကိုမှတဆင့်နည်းပြကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာသရုပ်ပြကြသူသင်တန်းဆရာအားဖြင့် facilitated ဖြစ်ပါတယ်
အခမဲ့တိမ်းညွတ်, သင်ရိုးညွှန်းတမ်းအကြမ်းဖျင်း, ထိုသင်တန်းဆရာ (s) ကိုအတူဆွေးနွေးမှုနှင့် / သို့မဟုတ်ဘွဲ့ရကိုးကားမှတဆင့် "စမ်းသပ်-drive ကို" ကိုအခွင့်အလမ်းကိုပရိုဂရမ်ကမ်းလှမ်း
အဆိုပါIAC®မနှင့်မဆိုအထူးသဖြင့်နည်းပြကျောင်းသို့မဟုတ်အစီအစဉ်ကိုထောက်ခံနိုင်ဘူးနေစဉ်, အတော်ကြာနည်းပြကျောင်းများနှင့်လမ်းညွှန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သုံးစွဲဖို့လိုင်စင်ရနေကြတယ် ပိတ်ပင်နည်းပြMasteries® သူတို့ရဲ့သင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင့်လေ့ကျင့်ရေးနည်းစနစ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်။
သငျသညျ In-လူတစ်လေ့ကျင့်ရေးသို့မဟုတ်တစ်ကို virtual (teleclass / webinar) program ကိုပိုနှစ်သက်ပါသလား?
ရှိလျှင် pre-အရည်အချင်းများ, ဝန်ခံချက်များအတွက်ဘာတွေလဲ?
အတန်းအရွယ်အစားသင်နှစ်သက်တဲ့သင်ယူမှုစတိုင်နှင့်အတူ align ပါသလား?